မား-မတ်-မိုး-မာ-ပေါက်-ပု-ကင်း အဖွဲ့ဂျီး သို့ …၀တ်လစ်စလစ် ပေးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မား-မတ်-မိုး-မာ-ပေါက်-ပု-ကင်း အဖွဲ့ဂျီး သို့ …၀တ်လစ်စလစ် ပေးစာ
မား-မတ်-မိုး-မာ-ပေါက်-ပု-ကင်း အဖွဲ့ဂျီး သို့ …၀တ်လစ်စလစ် ပေးစာ
Posted by ムラカミ on Jan 19, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Society & Lifestyle, Think Different | 66 comments
မြန်မာစာဗျည်း စာလုံး များနှင့်ပတ်သတ်၍ အနည်းငယ် ပြောဆိုလိုပါတယ်ချင့်…
၁။ ဗျည်း-၃၃ လုံး ရှိသည်ဟု မှတ်ဖူးပါသည် ချင့် ….။
၍-ဤ-၌-၄င်း စသည်တို့ မပါဝင်သောကြောင့် အနှီ အရာတို့မှာ ဘယ်ကလာသနည်းဆိုတာကို…သိချင်ပါတယ်ချင့်။
၂။ ဍ တို့ ဃ တို့ ဉ တို့ လို မသုံးသလောက် အလွန် အသုံးနည်းသော ဗျည်းများကို
နောင်တွင် ဖျက်သိမ်းသင့် သည် မဖျက်သိမ်းသင့်သည် ကို သိလိုပါတယ်ချင့် …။
၃။ နိုင်ဂျံဂါး ဘာသာ စာလုံးများကို မြန်မာစာတွင်ရေးရာတွင် …
၃.၁ မြန်မာမှုပြုမည်လော …(HR- လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်, entrepreneur – စွန့်ဦးတီထွင်)
၃.၂ အသံထွက်အတိုင်းရေးမည်လော …(ဒီမိုကရေစီ၊ အမေရိကန်၊ သြစတေးလျ)
၃.၂.၁ မည်သည် ကို အမှန်ယူမည်နည်း (ဘက်ခမ်း နှင့် ဘက်ဟမ်း ၊ နာအိုမီ ၀ပ်စ် နှင့် ညိုမီ ၀ပ်စ် ၊ မော်ရင်ဟို နှင့် မော်ရင်ညို…)
၃.၂.၂ အသံအမှန် ထွက်အောင် ပေါင်းမည်လော..(film-ဖင်လ်မ် ဖလင်မဟုတ်..၊ messenger မက်ဆင်န်ဂျာ ၊ Shiseido ရှိဆေဲးဒိုး)
၃.၃ ဘိုလိုညှပ်၍ ရေးမည်လော …(Software, Framework, Compatibility)
ထိုသို့ရေးပါက သတင်းစာ ဆြာကြီးများ မီးဒုတ် ရှို့ကြသည်ဟု ကြားဖူးပါသည် ဟုတ်ပါသလားချင့် …။
အဖွဲ့ဂျီး၏ သဘောထား မူဝါဒ ကို သိချင်ပါတယ်ချင့်..။
၄။ ဆွေးနွေးချက် အမှတ် ၂ နှင့် အမှတ် ၃.၂.၂ ကို ကိုးကား၍ ဗျည်းအသစ် တီထွင်ဖန်တီး တည်ဆောက်ရန် အစီအစဉ်ရှိမရှိ သိချင်ပါတယ်ချင့်..။
ဥပမာ အသုံးများသော ..အင်္ဂလိ စာလုံး F နှင့် V တို့ ၏ အသံသည် မြန်မာစာတွင် မရှိပါ ။ ဖဦးထုပ် နှင့် ဗလချိုက်(ဗထက်ချိုက်-ဟု အချို့ခေါ်)
ကိုသာ သုံး၍ မြန်မာမှုပြုသည်ကို တွေ့ရပါတယ်ချင့် ။ သည်တော့ ဖဦးထုပ် သည် fa-oo-htoke မဟုတ်သဖြင့် F သံမထွက်ပါ…။
ဗလချက်သည်လည်း ba-la-chike သာဖြစ်သောကြောင့် Va သံမထွက်ပါ။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံသူားတိုင်း F နှင့် V ကို ဘိုများနည်းတူ
ပီသစွာ ထွက်နိုင်ကြပါသည် ။ “ရေးတော့ အမှန် ဖတ်တော့ အသံ” ဆိုသည့် မြန်မာစာပေ လက်ကိုင်ဆောင်ပုဒ်နှင့် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး
ဆန့်ကျင်လျက်ရှိသော “ဖတ်တော့ အကောင်း ရေးတော့ စောင်း” ဖြစ်နေသည်ကို ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ တွေ့ရှိရပါတယ်ချင့်။
ဒါကြောင့်မို့ အဆိုပါ စကားလုံး ၂လုံးအတွက် ဗျည်းအသစ် တီထွင်ဖန်တီးထည်ဆောက်ပေးဖို့ လေးစားစွာ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်ချင့်…။
“ဟာ” နေတာလေး တွေ “သ” ပေးနိုင်ရန်ရည်သန်၍
မရေးတတ်ရေးတတ်ဖြင့် “ဟာသ” ရေးပြီး ချစ်ခင်သမှုဖြင့် ကြည်စယ်ပါသည်ခင်ဗျ.
၁။ ။၍.ဤ.၄င်း ဘယ်ကလာပါသလဲချင့်..သများလဲသိဘူးချင့်
နောင်တွင် ဖျက်သိမ်းသင့် သည် မဖျက်သိမ်းသင့် ?
အသုံးနဲပေမဲ့ ဖျက်လို့ မရဘူးချင့်
ဍကို ပါဠိတွေမှာသုံးတယ်…..သံဃာတွေရှိတယ်.. ဉာဏ်မတိမ်ပါနဲ့ 
၃။ ။နာမည်တွေကိုတော့ ဇာနည် ဆို ဇာနည် အောင်ဆန်းဆို အောင်ဆန်း ပဲဖြစ်သင့်တယ်ချင့်
အမေဒီကန်ရောက်မှ ဇားနည်..အောင်းဆန် ဆိုမှားမယ်ချင့်.ဒါကြောင့်
ဘက်ခမ်းလား.ဘက်ဟမ်းလား သိချင်ရင် လေယာဉ်ပျံစီးပြီး ဘက်ခမ်းတို့ ရပ်ကွက်ထဲသွား
ဘက်ခမ်းကို သူ့ ရပ်ကွက်သားတွေ ဘလိုခေါ်လဲ နားထောင်..သူတိုခေါ်တဲ့အသံ.အဲတာအမှန်ပဲချင့်
Software,Framework,Network,Application အဲတာတွေကို စာရေးတဲ့အခါ မူရင်း အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီး မြန်မာလို အဓိပ္ပါယ် ပါ
F,V တို့ အတွက် ဗျည်းအသစ်ကတော့ အထက်ကို တင်ပြလိုက်ပါဦးမယ်ချင့်
ပါးစပ်က ထွက်တဲ့အတိုင်း အက္ခရာစာလုံးထုတ်ဖို့ က အင်မတိအင်မတန် မဖြစ်နိုင်လို့ ပါချင့်
ဉ က ဘုန်းကြီးတွေတော့ မသိဘူး…
ကိုအောင်ဘု တော့ သုံးတယ် …
စာလုံးအသစ် ကိစ္စက လွယ်ပါတယ်ကွယ် …
​- အ၀ိုင်း၊ လေးထောင့်၊ သုံးမြှောင့် သင့်လျော်ရာ သင်္ကေတ တခုခု ကို “ဗ” နဲ့ “ဖ” တို့ အပေါ်အောက်
နံဘေးဝဲယာသင့်လျှော်ရာ တနေရာရာ မှာ ကပ်ပေးလိုက်ပြီး
– “ဗ” သက်သက် ဆိုလျှင် Ba လို့ထွက်ပါ “ဗ+ သင်္ကေတ” ဆိုလျင် Va လို့ထွက်ပါ
– “ဖ” သက်သက် ဆိုလျှင် Pha လို့ထွက်ပါ “ဖ+ သင်္ကေတ” ဆိုလျင် Fa လို့ထွက်ပါ
လို့ ပြဌာန်း ပေးလိုက်ရင် ပီးတာပါပဲဂျာ….
ပေါက်မောက္ခ ကြီး သမ်ဒ ဂျီးဖြစ်ရင် ပြဌာန်းပေးမယ် မီဟုတ်လားဟင်င်င်င်….
film ကိုဖလင်လို့ အခေါ်ကြာလာတဲ့အတွက် ဖလင်ပဲဆက်သုံးတာကောင်းပါတယ်ခည၊ အခေါ်ကြာပြီးမြန်မာတွေတရားဝင်သုံးနေတာရှိပါတယ်ခည။Victoria ကို ၀ိတိုရိယလို့ ခေါ်နေပါတယ်ခည၊မက်ဆင်ဂျာက တော်ပါသေးတယ်ခည၊ ပါစင်ကြယ်ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်ခည၊ ကုန်ပစ္စည်းအပျော့ကို မြန်မာမှုပြုရင် လူရွှင်တော်တွေ ကားကို မြန်မာမှုပြုသလို ဘိန်း(ဘီး) လေးဘိန်းပါပြီးစက်တပ်ထာသောလှည်းတွင်းသို့ လူဝင်လျှက် စက်ကိုနှိုးကာ ဘိန်းများကို အပေါ်ကဂွေဖြင့်ထိမ်းကြောင်းပြီးသွားလိုရာသို့……….. ထိုကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးကုန်နိုင်ပါတယ်ခည။ F သံကိုထွက် ရန် အခြားသင်္ကေတ မတွဲပဲ “ဖ” အဆံကလေးကို ညာဘက်တွင် မရေးပဲ ဘယ်ဘက်တွင် ထားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ခည၊ V သံအတွက်လည်း “ဗ” ရဲ့ အချိုင့်လေးကို “ဘ” ရှိရာဘက်သို့ လှည့်ရေးသင့်ကြောင်းပါခည။
မြန်မာမှုပြုပြီး မြန်မာပိုင် သာ လုပ်လိုက်တော့။
တခြား လူမျိုးနဲ့စာရင် မြန်မာက ကိုယ်ပိုင်စာ ရှိတယ်။ ကိုယ်ပိုင် အက္ခရာရှိတယ်။ စကားသံနဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး သူများ အက္ခရာကို မှီငြမ်း ကိုးကားရတာမဟုတ်တဲ့ အတွက် ဂုဏ်ယူဖွယ် အလွန်ကောင်းလှပါသည်။
မိုးပြာရောင် ပြတင်းတံခါးများ ဟူသည် ကမ္ဘာ့ အနှံ့ ကွန်ယက်ဖြန့်ကျက်ထားသော အနုမြူအပျော့မှ
စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသည့် အချက်အလက်ဌာနများပေါ်တွင် တည်ဆောက်၊ ဖွင့်လှစ် ကွပ်ကဲ နိုင်သော
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့် တိမ်တိုက် စင်္ကြန်ဖြစ်ပါသည်။
Windows Azure is an open cloud platform that enables you to quickly build, deploy and manage
applications acrossaglobal network of Microsoft-managed datacenters.
ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုစီးဆင်းရာ သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် ဒါကတော့ ဒို့ပိုင်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုလို့မပြောနိုင်သလို ကိုယ်နဲ့မဆိုင် ကိုယ်မကြိုက်တိုင်း သရုပ်ပျက်ယဉ်ကျေးမှု လို့ ရိုးစွပ်လို့မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ယဉ်ကျေးမှုပျံ့နှံ့မှုဟာ ချားရဟတ်လိုလည်ပါတ်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ပါ။
ဋ ဌ …စသည်တို့ကို ဖျောက်ဖျက်ရင် မြန်မာလူတိုင်းစေ့ ကျွမ်းဝင်အောင် မနည်းလုပ်နေရသေးတဲ့ “မ၊သိ။ဘူး။သေး။တဲ့။အော်။တို။ အက်။အောက်။အိုက်” ဆိုတဲ့ မြန်မာဝေါဟာရ အစဉ်စီတန်းမှု လမ်းကြောင်းကြီး ကို ထိခိုက်ပြီး မြန်မာအဘိဓါန်ကြီး ကမောက်ကမဖြစ်သွားမှာ စိုးရပါတယ်။
တကယ် မသိလို့ (ပြီး) အလွန် သိချင်လို့ပါဗျ…
စကားစမပ် ကမ္ဘောဒီးယားက ခမာ အက္ခရာက မြန်မာနဲ့အလုံးရေ တူပြီးတော့ မြန်မာ က နဲ့ စ ပြီး သူတို့က အ နဲ့ စတယ် ဆိုလား.. အဲလိုတော့ ကြားဖူးတယ်။အက္ခရာ ပုံစံတွေ ဆင်တယ်လို့လည်း ကြားတယ်။
ယူနီကုဒ် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ လူတွေကတော့ မြန်မာစာထက် အရင် ယူနီကုဒ် ဖြစ်သွားခဲ့ကြတဲ့ ..(မြန်မာစာလိုလည်း ပင့်၊ရစ်၊ဆွဲထိုး၊ လို ပေါင်းစည်းရတဲ့ သရတွေပါတဲ့)
အိမ်နီးနားချင်း လမ်းကွေခ်ျ့ တွေကို လေ့လာခဲ့ကြဖူးတယ်ဆိုတာတော့ ကြားဖူးပါသည်။
ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရတာ ကတော့ “မ၊မိ၊စု၊ရေ၊ဆဲ၊ပြော၊သံ၊ချို”တဲ့ “အ၊အိ၊အု၊ဧ၊အဲ၊အော၊အံ၊အို” ပေါ့၊ အဲဒါကို အ၊အာ၊အား၊အိ၊အီ၊အီးလုပ်၊
အသတ်တွေကတော့ “ကို၊ငယ်၊စိတ်၊ညစ်၊တယ်၊ နတ်၊ပင့်၊မယ်” ၊(က၊င၊ စ၊ ည၊ တ၊ န၊ ပ၊ မ) သတ်ပေါ့၊
အပေါ်က မမိစု အ၊အား၊ အီး ပြီးရင်၊ သူတို့ ကို ကိုငယ် နဲ့ လိုက်သတ်၊
ဗျည်းတွဲတွေကတော့ ပင့်၊ရစ်၊ဆွဲ၊ထိုး၊ ပင့်ထိုး၊ရစ်ထိုး၊ဆွဲထိုး၊ ပင့်ဆွဲထိုး၊ ရစ်ဆွဲထိုး၊
အဲဒါတွေ မမိစုနဲ့ လိုက်တွဲ၊ပြီးရင် အ အား အီးလုပ်၊ ပြီးရင် ကိုငယ်နဲ့ လိုက်သတ်၊
ကျနော်လည်းငယ်ငယ်ကသင်ထားရတာကို သဂျီးတင်ထားတဲ့ စာလုံးပေါင်းစစ်ရန် ထဲသွား တွဲပြီးကြည့်ရတာ၊ အဲဒီမှာ သွားတွဲကြည့်ရင် ပိုရှင်းတယ်။
ကျနော်မရှင်းတာက သေးသေးတင်ပြီး ကုံး တာနဲ့ “မ” သတ် ပြီးကုမ်း တာပ၊ဲ ခွစ်ခွစ်…..
သေးသေးတင်ပြီး ကုံး တာက သီကုံးဖွဲ့နွဲ့တာ၊ ပန်းကုံးတာ။
ကုန်း က ကုန်းမြေမြင့်၊
ကုမ်း ကတော့ ကုမ်းထက် ကြက်ဆီထမင်း
ကုမ်းထက်ကို တော့ အဲလိုပေါင်းဘူးဗျ
ကုံးထက်လို့ ပေါင်းတာပါ မမရေ
ကုမ်းကို သုံးတာတော့ မတွေ့ဖူးသေးဘူး(အခုထိပေါ့လေ)
အဘိဓါန် တန်းစီစာရင်း = အ ။ အိ ။ အု ။ အေ ။ အဲ့ ။ အော် ။ အို ။ အက် ။ အောက် ။ အိုက် …. ဆိုရင် သိလောက်ပါပြီ။
၁။ ဘာသာစကားတိုင်း စာတိုင်းမှာ ထူးခြားချက်ရှိတဲ့ စကားလုံးတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။
တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ဂျပန်စာမှာ a, ka, sa, ta, na, ha, ma ya, r, w (ထင်ရာ စွတ်ရေးတာ၊ မှားရင် ပြင်ပေး) ထဲမှာ ၊ နောက်ဆုံးစာလုံး ya၊ r နဲ့ wa တွေက တခြားစာလုံးတွေနဲ့ မတူဘူးလို့ ကြားဖူးတယ်။
အဲဒါက ၍-ဤ-၌-၄င်း တို့အတွက် ဆင်ခြေပါ။
၂။ အသုံးနည်းတဲ့ ဍ၊ ဃ၊ ဉ တို့မှာ ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပါယ် အသုံးတွေရှိတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ သိသူများ ၀ိုင်းကူပါဦး။ (ဒီမှာ လာကြပ်နေလို့)
၁။ Ya Gyou လို့ခေါ်တဲ့ Y နဲ့စတဲ့ သရ တန်းမှာ Ya, Yu ,Yo
၃လုံးပဲ ရှိတယ်ခည။ တခြား Gyou တွေလို ၅လုံး (A, I, U ,E, O) ၅လုံးမရှိဘူး…
Ya, Yi, Yu, Ye, Yo ဆိုပြီး …အရင်က ရှိတယ် ခည …။ သို့သော် ဘယ်အသံထွက်တိုင်း..
Ye=E ဖြစ်ဖြစ်နေတော့ I,E ကိုပဲ သုံးပြီး YI, YE ကို
ဖြုတ်ချခဲ့တယ်လို့ ဆြာသမားတယောက် ပြောတာ မှတ်ဖူးပါတယ်..
နာမည်ကျော် ရှေးဟောင်း တံငါမြို့လေး အဲ့ဘိစု ကို အင်္ဂလိပ်လို ရေးတဲ့အခါ
Yebisu လို့ ရေးတာ benchmark အနေနဲ့ တွေ့ဖူးပါကြောင်း..
၂။ အသုံးနည်း စာလုံးတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင် သုံး တာလေးတွေတော့ သိချင်သား..။
“ကြပ်” အစား .. “ကျပ်” ဖြစ်မလားလို့ဗျ…
“ကြပ်” က စောင့်ကြပ် ဖြစ်မလားလို့ပါ…
မူလီ “ကျပ်” တဲ့ “ကျပ်” …
အိုဘာတဲ့ ….. အကျပ်အတည်းဆိုတဲ့ “ကျပ်”….
ရွာသူား တို့ မှတ်….
သံဃာ၊ ကတော့ အိမ်ရှေ့က ဖြတ်ဆွမ်းခံကြွသွားလို့ သတိရသွားတယ်။
ညအသေး ကို ကထိန်သင်္ကန်းကြီး ကိုခေါ်တဲ့ နေရာမှာ သုံးတယ်။ ကီးဘုတ်မှာတောင် ဘယ်နားမှန်းမသိလို့ ဒုကုဋ် သင်္ကန်းကို ခေါ်တာ…
ဉ က်သင်္ကန်း ကိုပြောချင်တာထင့်..
ဟုတ်ပါ့.. ကီးဘုတ်မှာ ရှာမတွေ့လို့..
အုံးအွမ် အစား ဥုံးဥွမ် လို့ သုံးလို့ ရသေးတယ်။
အ အာ အိ အီ ဥ အူ အေ အဲ အော သြ အံ အား.. ကို အရင်းတည်ပြီး အ အသံ အာကြပါကုန်လော။
V ကတော့ ဗွီ လို့ အသံထွက်တာ မမှန်ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။
V အတွက် အသံထွက် အသစ်တစ်ခု ရှာသင့်တယ်။
အဲဒါတွေတော့ နားလည်ဘူး။ သို့ပေသိ ကြောင်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းအစား မဟာကျား ဟုပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်သင့်ပါကြောင်း…။
ဘာသာစကား တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ထပ်တူပြုဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသံကို မြန်မာတွေ ပီသအောင် ဆိုနိုင်ဖို့ခက်သလို
့မြန်မာစကားပြောသံကိုလည်း အင်္ဂလိပ်တွေ ပီပီသသ လိုက်မဆိုနိုင်ပါဘူး။
မြန်မာစာမှာမှ ဗျည်း-၃၃ လုံး ရှိသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်က ဗျည်း-၂၆ လုံး ပဲ ရှိတယ်။
မြန်မာဝေါဟာရတိုင်းကိုလည်း အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ဆိုဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
ကျောက်ဆင်းတုခေါင်းငြိမ့်၊ ဖားသက်ပြင်း တွေကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုများ ပြန်ဆိုမလဲ သိချင်ပါတယ်။
သများတို့ စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ ဘကြီး၊ ဘထွေး၊ ဦးကြီး၊ ဦးလေး၊ ကြီးတော်၊ ဒွေးတော်၊ ဒွေးလေး၊ ဒေါ်လေး စတာတွေကိုလည်း အင်္ဂလိပ်လို သိချင်ပါတယ် ချင့်။
ဘကြီး နဲ့ ဦးကြီး တူဝူးလားကွယ်….
ဂယ်တော့ …ဦးလေး ဆိုတဲ့ နာမ်ကို ပဲ ဦးဦး ဒါမှမဟုတ် လေးလေး …ခေါ်ကြသေးတာရယ်…
၂လုံးလောက်ပဲ ထားပြီး ထူးမခြားနား ..၅လုံးကို မေ့ပစ် …
အဲ့သည့်အစား မရှိသေးတဲ့ စကားလုံး အသစ် -၅လုံးမွေးဖွားလာမယ်ဆို
ဥပမာ .(.ယောက်ျားလေးများ နှုတ်ခမ်းမွေးပေါက်တဲ့နေရာ (၀ါ) နှာခါင်းနှင့် အထက်နှုတ်ခမ်းအစပ်ကြား နေရာကို
မည်သို့ခေါ်သည် သေချာမသိသေး …)
ဘကြီးနဲ့ ဦးကြီး မတူပါဘူးကွယ်။ ဘကြီးက အဖေ့အစ်ကိုကို ခေါ်တာဖြစ်ပြီး။ ဦးကြီးက အမေ့ အစ်ကိုကို ခေါ်တာပါကွယ်။ ရှေးရှေးတုန်းက လူကြီးတွေက သေသေချာချာ သတ်မှတ်ခေါ်တာမို့ ဘကြီးလို့ ခေါ်လိုက်တာနဲ့ အော် သူ့အဖေရဲ့ အစ်ကိုကိုးလို့ တန်းသိပါတယ်တဲ့။ လေးလေးဆိုတာက အမေ့မောင်ပါ။ ဦးလေး ဆိုတာက အဖေ့ညီကို ခေါ်တာပါ။
ကျန်သွားလို့ ထပ်ရေးတာပါ။ နှုတ်ခမ်းမွှေးပေါက်တဲ့ နေရာနဲ့ နှုတ်ခမ်းကြားကို နှာယောင်လို့ ခေါ်သလားလို့။
Radio ကို အသံထွက်ဓါတ်ခွက်
4-stroke engine ကို ပါတ်လည်လေးမောင်းစက်
Micro Software ကို အနုစိတ်အပျော့ထည်
Soft drink ကို အပျော့သောက်
အမောင် ဖားသက်ပြင်းေ၇ အဲ့ဒီ ဍ၊ ဃ၊ ဥ တို့ကို မြန်မာစာမှာ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲဆိုတာကို ဆရာဦးအောင်သင်း (သို့) ဆရာချစ်ဦးညို (တယောက်ယောက်ပဲ သိပ်မမှတ်မိလို့) က ဟောပြောထားဘူးပါတယ်ကွယ်။ နားထောင်ထားတာ ကြာပြီမို့ ကိုယ်ကလည်း မှတ်ဥာဏ်သိပ်မကောင်းလို့ ဖြစ်မယ် ဆရာ့လိုတော့ ဂဃနဏ မရှင်းတတ်ဘူးကွယ်။ ဍ က မြန်မာတွေမှာ ဍကောက်ပင်ရှိတယ် အဲ့အတွက် အသုံးဝင်တယ် ဆိုတာတော့ မှတ်မိတယ်။ ဆရာ့စာတွေကို ရှာဖတ်ကြည့်ပါလား စိတ်ထဲမှာ ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ မမှီ စိတ်ထဲတော့ ဆရာဦးအောင်သင်း ဟောတာလို့ ထင်တာပဲ။ သေသေချာချာ မမှတ်မိလို့ အတိအကျတော့ မပြောရဲဘူးကွယ် တော်ကြာ သဂျီးက အကိုးအကားနဲ့ လာတော့မှာ။
“ဎ” ဒါကလေး ကို လည်း ဘယ်မှာ သုံးသလဲ သိချင်ထှာ …
သည်လိုပါဗျာ …. လူ့ ဦးနှောက်ကြီးဆိုတာကလည်း ဆန်းသား…။
မှတ်မိချင်တာတွေကျ မေ့မေ့နေတတ်ပြီး မေ့ချင်နေတာတွေကျ မေ့လို့ မရ၀ူးရယ်…
အဲ့ဒီ “ဎ”တို့ “ဉ” တို့ “ဠ”တို့ ကို ဖြုတ်ဖြုတ်မဖြုတ်ဖြုတ် …
အသုံးနည်းလို့ ကျုပ်က မေ့ပစ်ချင်တာ မေ့ မရ၀ူးရယ်…
ဗမာစာ မှရယ်မဟုတ်ပါဘူး …ဘိုစာမှာလည်း ဇိုင်လိုဖုန်း လို စာလုံးမျိုး မေ့ပစ်လို့ ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ…
အဲ့သလိုသာ မေ့ပစ်လိုက်ရင် ခေါင်းထဲမှာ နေရာလွတ်လေး တွေပေါ်လာပြီး ပိုအသုံးများတဲ့
တစုံတရာတွေ ထည့်နိုင်မလား လို့ပါ….
မှတ်စရာရှိတာတွေ မေ့တတ်လွန်းလို့ ….
“ဎ” (ကီးဘုတ်မှာမတွေ့လို့ ကော်ပီကူးလိုက်တယ်… )
မြန်မာစာမှာ မမြင်ဖူးပေမယ့် ပါဠိမှာတော့ အာယုဝတ်ထန (ပါဌ်ဆင့်ပေါင်းဖို့လိုက်ရှာတာလည်း မတွေ့ဘူး.နောက်မှ ရှာကြည့်ဦးမယ်..) ဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာ ဎ ကို သုံးပါတယ်။ အထဲမှာ ဋ ကို ထည့်ပြီး ပါဌ်ဆင့်သုံးထားတာ…
မြန်မာအသုံးတွေနဲ့ ပါတ်သက် လို့ ဆရာ မောင်သာနိုး မဂဇင်း (ပါတ်ဆင့် မရိုက် တတ်သေးလို့ သည်းခံပါ)
တွေမှာအခန်းဆက် ရေးဖူးပါတယ်။ကလျာ လား အတွေးအမြင် လား မသိ တော့ဘူး၊ သူ့ဟာနဲ့သူ ရှိပြီး
သားတွေပါ။ရှေးလူကြီးတွေက လိုအပ်လို့ထားခဲ့တာပါ၊ ရှာကြည့်ပါအုံးမယ်
ကျနော် ကအဝေးရောက်နေလို့ ပါ…
(ဆြာကြီးရဲ့ စာတွေကို ကိုယ့်စကားလုံးနဲ့ကိုယ် ပြန်ချရေးဖို့ ဝေါဟာရ ချို့တဲ့လို့
အရင်ကတော့ ကျနော် ဆြာကြီးမောင်သာနိုးရဲ့ စာတွေဖတ်ဖူးတယ်ဗျ…
lost treasures ဆိုတာမျိုးထင်တယ် ..ဘာသာပြန်လိုက်တော့မှ
တန်ဖို့ ယုတ်လျော့သွားတတ်တာမျိုးတွေ လိုတာထက် ပိုသွားတတ်တာလေးတွေ…
နောက်တခတ်ဆို ကျုပ်တို့လည်း ရှေးလူကြီးတွေဖြစ်မှာဗျ…
စကားလုံးအသစ်တွေ မထားခဲ့ချင်ဘူးလား …ဟင်င်င်?
ပါတ်ဆင့် ရိုက်ချင်ရင် 1 ရဲ့ဘေးနား.Tabကီးရဲ့အပေါ်က ကီးလေးကို လိုချင်တဲ့အက္ခရာ နဲ့ တွဲသုံးပါတယ်. (အန်တီမမ ထံမှသိခြင်း)
ကိုဂီရေ..တချို့အသံထွက် နဲ့ အသုံးများတာတွေ ထပ်ထည့် ပြန်ပြင်စတာတာတွေကို ပြင်နိုင်တဲ့လူတွေပြင်ပေးစေလိုကြောင်း.
“ဎ” အသုံးကလည်းအတော်ရှားသားဗျနော်..အိမ်ရောက်မှ ပြန်လှန်တော့မယ်ဗျာ.
ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ် ကတော့လိုအပ်ရင်အသစ်မွမ်းမံတာကောင်းမွန်ကြောင်းကို ဂလိုဆိုခဲ့ပါတယ်…
”မြန်မာလူမျိုးသဒ္ဒါဆရာတို့သည် မြန်မာသဒ္ဒါကိုပြုစုကြသောအခါ စာပေအဖြစ်တည်ရှိသော မြန်မာစကားကို အခြေခံထားကြသည်။ လူမျိုးခြားသဒ္ဒါ ဆရာတို့ကား နေ့စဉ်သုံးနေသော နှုတ်ပြောစကားကို အခြေခံထားသည်။ ဤကားအရေးကြီး သောခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာ လူမျိုးသဒ္ဒါဆရာတို့သည် ဤစာတန်းများကို သဘောပေါက် လေ့လာခွင့်ရကြလျှင် မိမိတို့၏ ဘာသာစကားကို သိပ္ပံနည်းကျခေတ်မီမီ အကွက်စေ့စေ့ ရှုမြင်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်”။ (မင်းသုဝဏ်)
ငှက်ပျောသီး.. ငှက်ပျောဆို.. သီး
ဘူးဒီး – ဘူးဆို..ဒီး
ဒါက … “ရေးတော့ အမှန် ဖတ်တော့ အသံ” မဟုတ်လား..။
သဂျီးခင်ဗျ ဘူးသီးကို ဘူးသီးလို့ပဲ အသံထွက်ကြပါတယ်ခင်ဗျ၊ ဗူးဒီးလို့ထွက်တာရှားပါတယ်ခင်ဗျ
သဂျီးပြောချင်တာက အသံတွေကိုထွက်တဲ့အခါ သံပြင်း၊သံပျော့ကိုလိုက်ပြီး တွဲစပ်ပြီးထွက်လို့လွယ်တာကို ထွက်တဲ့ကိစ္စလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ၊ အဲဒါက ဘယ်မှာထင်ရှားသလဲဆိုရင်
တစ်ကျပ် ကို ဒဂျပ်လို့ထွက်တယ်ခင်ဗျ၊ တစ်ကျပ်လို့ထွက်ရတာ ထောက်နေတယ်
နှစ်ကျပ် ကို နှကျပ်လို့ပဲ ထွက်ပါတယ်၊ နှ ဂျပ်လို့ ထွက်ရတာ မလွယ်ပါခင်ဗျ၊
သုံးကျပ် လည်း အမှန်ထွက်တာများတယ် သုံးဂျပ်လို့ထွက်ရင်လည်းရတယ်
လေးကျပ်လည်း တူတူပဲ နှစ်မျိုးထွက်လို့လွယ်သေးတယ်
ခြောက်ကျပ် ကို ခြောက်ဂျပ်လို့ ထွက်ဖို့ မလွယ်ပြန်ဘူး
ဒါကတော့ ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပါ၊ အခြား အသံတွေရှိဦးမှာပါ
ဒီအကြောင်းကို ကိုရင် စည်သူကောင်းကောင်းသိမှာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ဒီဟာကို ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခိ က စတုမဟာရာစ် လူသတ်မှု ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုထဲမှာရှင်းပြထားတာပါခင်ဗျ၊
သဂျီး တောင်တွင်း လေကျ ဘယ်တုန်းက ရ ???
၀တ်လစ်စလစ်လမ်းမကြီးကတော့ ဆရာ ဒဂုန်တာရာရဲ့ မူပိုင်စာလုံးတဲ့ ၀တ်လစ်စလစ်ပေးစာကတော့ ဖားသက်ရဲ့ မူပိုင်စကားလုံးဖြစ်မလားပဲ……….။
အဖုတ် နဲ့ အကင် ဆိုတာ ဘယ်လိုသဘောကွဲလဲသဒုံးဗျာ
မှတ်ချက်။ ။ ပေါက်လွတ်ပဲစားမရေးစေလိုပါ။ ဤတွင် မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်ဖြင့် ဖုတ်ခြင်းလား ( ဝါ )
ကင်ခြင်းလား ဆိုသည်ကိုပါ ထည့်သွင်းရေးသားပေးစေလိုပါသှ်။
စာမူခေါ်ဘို့ အစီစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ မနည်းစေရပါဘူး
စာလုံးပေါင်းနဲ့ အသံထွက် ကွာပါတယ်ဂျ
အဖုတ် အကင် မျိုးစုံ ၀ယ်စားသူ
အဖုတ် နဲ့ အကင် ဆိုတာ မတူပါဘူး။
အဖုတ် ဆိုတာ မီးထဲထည့်ပြီး (မီးနဲ့ ထိတွေ့ပြီး) ချက်ပြုတ်တာ၊
အကင် ဆိုတာ မီးရှိန်နဲ့ (မီးနဲ့ မထိတွေ့ပဲ) ချက်ပြုတ်တာ၊
မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် ဖြင့် ကင်ခြင်းဟု ထင်ပါကြောင်း….
ပရော်ဖက်ချာကြီး ဖားတက်ပြင်းချင့် အဲ ခင်ဂျ
ဍ တို့ ဃ တို့ ဉ တို့ လို မသုံးသလောက် အလွန် အသုံးနည်းသော ဗျည်းများကို
ဃ ကြီးကိုတော့ ဖျက်လို့ မဖြစ်ပါဘူးဂျ
ဃနာဆွမ်း ရေးရင် ရေးစရာ မရှိမှာစိုးလို့ပါဂျ
ဉ က်သင်္ကန်း ကပ်လှူဖို့အတွက် ချန်ထားလိုက်ပါဂျာ
တံမြက်စည်းလှဲ၊ ကြမ်းတိုက်၊ တောက်တိုမယ်ရ ရာထူးများဖြင့်
ဖားသက်ပြင်းကို (တတ်သလောက် မှတ်သလောက်) အားထည့်ငြင်း ရရင်ဖြင့်…
ဘကြီး ဆိုတာ အဖေ့အစ်ကိုဖြစ်ပြီး၊
ဘထွေး ဆိုတာကတော့ အဖေ့ ညီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကြီး ဆိုတာ အမေ့ အစ်ကိုဖြစ်ပြီး၊
ဦးလေး ဆိုတာက အမေ့ မောင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒွေးတော် ဆိုတာ အဖေ့အစ်မ ဖြစ်ပြီး၊
ဒွေးလေး ဆိုတာက အဖေ့ နှမ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်ကြီး (ကြီးတော်) ဆိုတာက အမေ့အစ်မဖြစ်ပြီး၊
ဒေါ်လေး ဆိုတာ အမေ့ညီမ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနေရာမှာ နှမ နဲ့ ညီမ မတူသလို၊
ညီ နဲ့ မောင် လည်း မတူပါဘူး။
(တတ်သလောက် ဒါအကုန်ပဲ။ ထပ်မေးရင် မသိတော့ဘူး။)
နည်းနည်းရွှီး အဲ နည်းနည်းပြောကြည့်မယ်
ညီဆိုတာ အစ်ကိုက ခေါ်ပြီး
မောင်ဆိုတာ အမက ခေါ်ပါတယ် ….
ဟားမခ်စ်အဖွဲ့ နဲ့ မှားသွားမလို့ ။ကံကောင်းတယ်ဗျာ။
ကိုအင်ဇာဂီထင်ပါရဲ့ ။အကို့ ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အောင်မြင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်။
ည ဆိုတာ ဉ+ဉ ဖြစ်ပါတယ်၊
ပညာ ဆိုရင် ပဉ် ဉာ =ပင်ဉာ လို့ အသံထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အညမည သဘောတရား ရဲ့ အသံကို အင်ညမင်ည သဘောတရားလို့ထွက်ကြတယ်မလား။
ပညတ် ဆိုရင် ပစ်ညတ်လို့ အသံထွက်တယ်လေ။
ဒါကြောင့် ဉ ကလေးကို ဖျောက်လို့မရပါ။
ဥ နဲ့ မတူပါ။
ကျွန်မ အမြဲမှားသော စာလုံးများပါပေ။ :-)
တညင်းသီးမီးဖုတ်၊ပုဇွန်ထုပ်မီးဖုတ်၊ကန်စွန်းဥမီးဖုတ်=ဖုတ်ချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို မီးခဲ(သို့)ပြာထဲ ထည့်ပြီးတိုက်ရိုက်အပူရှိန်ရအောင်လုပ်နည်းပါ(Baking)
အကင် မှာ မီးကျီးခဲနှင့်တိုက်ရိုက်မတွေ့စေပဲ မီးအရှိန်အပေါ်မှ တံစို့၊သီတံ၊ညှပ်တို့ဖြင့် အပူပေးခြင်း(Grilling) ဖြစ်ပါတယ်။
(ပုပု ငါးရှဉ့်ကို ဖုတ်ချင်ကင်ချင်ရင် အဆင်သင့် စိတ်မကောက်ပဲ စားနိုင်အောင်လို့ :D)
Micorwave နဲ့ ကင်တယ်လို့သုံးရမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျနော်မှတ်သားထားဖူးတဲ့………..မိုက္ကရိုဝေ့မီးဖိုဆိုတာ အထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ အသား ထဲကို
အီလက်ထရို မဂ္ဂနက်တစ်ဝေ့ဗ် (အဲအဲ အခုပဲ မြန်မာလိုရှိပြီးသားကို ဘိုလိုရေးတဲ့ကိစ္စဖတ်လိုက်သေးတယ်၊မေ့လို့) လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေအကြိမ်များစွာ ဖြတ်သန်းထိုးဖောက်သွားရာက အသားဟာ အရည်မထွက် အရသာမပျက် ပဲ နူးအိသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဟန်းဖုန်း(အဲလာပြန်ပြီ)
လက်နဲ့ ကိုင်ပြောလို့လက်ကိုင်ဖုန်း( ကြိုးဖုန်းလည်းလက်နဲ့ကိုင်ပြောတာပဲ)၊ မိုဘိုင်းဖုန်း (ရွေ့လျားယူဆောင်သွားလို့ရလို့)။ ဆဲလ် ဖုန်း (ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုကို ဆဲလ် များလို ဆက်စပ်တည်ဆောက်ထားလို့) အဲဒီဖုန်းတွေကို များများသုံးရင် သူတို့ကထွက်တဲ့
လှိုင်းတွေဟာ ဦးခေါင်းကိုဖြတ်ဝင်သွားပြီး ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုိတဲ့( တချို့
သုတေသနတွေက မဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ငြင်း) သဘောမျိုးပေါ့။
ရေးရင်းနဲ့ စာက ဝေ့သွားတယ်ဗျာ
ဆိုတော့ မိုက္ကရိုဝေ့ဗ် မီးဖိုနဲ့ သုံးတာကို ပေါင်းတယ်လို့ပြောရင် ပိုသင့်တော်မလားလို့ပါ။
ဒါနဲ့ အဲဒီ “မိုက္ကရိုဝေ့ဗ်” ကို ဘယ်လိုမြန်မာမှုပြုရင်ကောင်းမလဲ၊ စဉ်းစားကြပါဦးခင်ဗျာ။
ဂီဂီမေးတဲ့နေရာကိုတော့ ဘယ်လိုခေါ်တယ်မသိဘူး၊အထက်နှုတ်ခမ်းပဲ ခေါ်မယ်ထင်တယ်။
နှာယောင်ဆိုတာတော့ နှာခေါင်းအထက် မျက်လုံးနှစ်ခုကြားလို့ထင်ပါတယ်။
ကျနော် နီကီတာ ကို ပြောဖူးတယ်ဗျ ..ဂေဇက်ပေါ်မှာပဲ …
အထက်နှုတ်ခမ်း ဆိုတာ နှုတ်ခမ်းနီဆိုး ဧရိယာ ကျော်သွားရင် နယ်နမိတ်ဆုံးပီမလားဗျာ…
သည်တော့ နှာခေါင်းနဲ့ အဆိုပါ နှုတ်ခမ်းနီဆိုး ဧရိယာ ကြားက နှုတ်ခမ်းမွေးပေါက်သော နေရာလေးကို
မြန်မာစာ စကားလုံးဖြင့် …အားပါးတရ ခေါ်ချင်စမ်းပါဘိ….
(ဘိုစာလုံး နှင့် ပါဠိသက်များ မပါရ ….)
ခုမှ အားပါးတရ ပြောစရာပေါ်လာတော့တယ်
အဲဒီနေရာက “နှစ်ခမ်း” မဟုတ်တဲ့ “တစ်ခမ်း” နေရာဗျ
နှုတ်ခမ်းနီဆိုးတဲ့ ဧရိယာကို အပေါ်နှုတ်ခမ်းလို့ပဲ ခေါ်တယ်။
နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို အောက်နှုတ်ခမ်း၊ အပေါ်နှုတ်ခမ်းလို့ ခေါ်လို့
နှုတ်ခမ်းမွှေးပေါက်တဲ့ ဧရိယာကို` နှုတ်ခမ်းအထက်´ လို့ စကားလုံးအသစ် ကင်ပွန်းတပ်လိုက်ရင် ကောင်းမလား
သူငယ်တန်းနဲ့ ပထမတန်း မြန်မာစာစာအုပ်ကို ပြန်ဖတ်ပြီး revision လုပ်ပြီးမှ ပြန်လာဆွေးနွေးတော့မယ် ….
( မာန် ) မာန တို့ကို ဥပက္ခာပြုကြကုန်သော
အကြင်သတ္တဝါတို့ကို ( ကျွန်ု ) ဤနေရာမှ တတိယမ္ပိ ( သာဓု ) ခေါ်ပါပေ၏
ဘပု ဘာကို ရိသလဲ ကျနော် ဉာဏ် မမီပါ…
ကျနော် ပြောနိုင်တာတခုတည်းကတော့ ….
သည်ပို့စ်ကိုရေးတာ ရည်ရွယ်ရင်း ….တခုတည်းပါ ….
ကမ္ဘာမှာ စကားလုံးအသစ်တွေ တပုံတခေါင်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်…
ဘိုလို ညှပ် ရေးတော့ သတင်းစာဆြာများ မီးဒုတ် ရှို့မယ်တဲ့ ….
ဗမာလို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်တော့ ဖောင်းပွလွန်းပြီး …လိုရင်းမရောက်တော့ …
ရှိသမျှ ဘိုစာလုံးကို မြန်မာ အသံထွက် မွေးစားရတာလည်း အဓိပ္ပါယ်မရှိ…..
လက်ရှိ ခေတ် သုံး သုံးနေကြတဲ့ စကားတွေမှာ …မြန်မာစာ မဟုတ်တဲ့ ..
ပါဠိ နဲ့ မွေးစားသား နာမ် တွေမပါကြေး ဆိုပြီး …သတ်မှတ်ကြည့်လိုက် …
ရေးကြည့်ပြောကြည့်လိုက် ….. ဘာလိုသလဲ …အဲ့မှာ သွားတွေ့ရမှာအမှန်ပဲ …..
(ကျနော် သည် ဟာကွက် ကလေး ကို ထောက်ချင်တာပါဗျာ …
အရည်အချင်းမပြည့်ပေမယ့် …ဆြာတွေ ဆက်လက်ဆွေးနွေးစေချင်လို့ါ
ဆက်ရရင် …. တိုတိုလေးနဲ့ ထိမယ့် (စွန့်ဦးတီထွင်) လို စကားလုံးမျိုး ..
ကျနော်တို့ ရေးကြည့်ကြစို့လား လို့ ပြောချင်တာပါဗျာ….
ကျနော် စကားမှားတာတွေရှိရင်လည်း အားလုံးကို… တောင်းပန်ပါတယ်နော်..
ဟုတ်ကဲ့ချင့် ဆိုတော့ ဟီးးးးးးး
မစ္စတာဂီရေ အသံထွက်တွေ အကြောင်းကို ပြောရမယ် ဆိုရင် မြန်မာလူမျိုးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်ကို သူတို့ လူမျိုး များနဲ့ တူအောင်အမှန်ဆုံး အနီးစပ်ဆုံး ထပ်တူကျအောင် ထွက်နိုင်တဲ့ လူမျိုးလို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။
ဒါလေးက ကျမ ဖတ်ခဲ့ မှတ်သားခဲ့ ဖူးတဲ့ စာလေးတွေကို ကိုးကားပြီး ကျမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်လေးကို ပြောကြည့်တာပါ။ မှားတာရှိရင်လည်း ထောက်ပြပေးပါ။
ပိဋကတ် သုံးပုံကို ပိဋကတ် သုံးပုံး လို့ ရေးမိသွားပါတယ် ပြင်ဖတ်ပေးပါ
မမ ရေ –
မမ ကိုတောင် မှန်အောင် မပေါင်းတတ်ဘဲ မား ဖြစ်အောင်လုပ်ထား တဲ့ သူငယ်လေး အား ခွင့်လွှတ် လိုက်ပါလော့။ ;-)
ဒီ ကော်နက်ရှင်နဲ့ကတော့ မန့်လိုက်ပျောက်လိုက် တော်တော်စိတပျက်ဖို့ကောင်းတယ်။
မြန်မာဝေါဟာရအသစ်တီထွင်ချင်သော သူရဲကောင်းလေးအား ခွေးလွှတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲ အဲ- ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
ခမည်းခမက်ဆိုရာမှာလည်း ခမည်းဆိုတာ (သားမက် (သို့) ချွေးမ) တစ်ဘက်ရဲ့ အမေ ဖြစ်ပြီး၊
ခမက် ဆိုတာကတော့ တစ်ဘက်ရဲ့ အဖေ ကို ခေါ်တာ လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
ပိုက်တန်း ပိုက်ရိုက်ဘော (တန်းနစ်)
စားပွဲတင် ပိုက်တန်းရိုက်ဘော (တေဘယ်လ်တန်းနစ်စ်)
လှံတံပစ် တို့ ..
သံလုံး သံပြား ပစ် တို့
တန်းကျော် ပြေးပွဲ တို့
လက်ဆင့်ကမ်း ပြေးပွဲ တို့ …
ပြေးခုန်ပစ် တို့လို အိုလံပစ်တွေကိုတော့ မြန်မာမှု ပြုပြီး…
သများတို့ရဲ့ ဘော တွေကို ကျမှ …ဘိုလိုပဲ သုံးနေတာ …
စိတ်ထဲ ဖိုးသိုးဖတ်သတ် ဖြစ်လွန်လွန်းလို့ ..
တတ်စွမ်းသ လောက် မြန်မာမှု ပြု ပေးလိုက်ပါတယ်…
ဘော ဌာနခွဲမှူး …
အနော်တို့ခေတ်လူငယ်များလည်း မညံ့ကြပါကုန်။ယခုလူသုံးများကြသော သယ်လွယ်ပြောကိရိယာများတွင် ပါဝင်သော အန်းဒရိုက်ဗားလ်ရှင်းများအား “ဂျင်းပေါင်မုန်”့ “ပျားဘီး” “ပေါင်မုန့်ရေခဲညှပ်” အစရှိသဖြင့် မြန်မာမှုပြုကြကုန်၏။အားကျမခံ ၀င်မန်တ့် သွားပါ၏